Wasarada Amniga Somalia oo ugu baqdey shacabka somaliyeed in ay la shaqeyaan Ciidanka amaanka. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wasarada Amniga Somalia oo ugu baqdey shacabka somaliyeed in ay la shaqeyaan...
Wasarada Amniga Somalia oo ugu baqdey shacabka somaliyeed in ay la shaqeyaan Ciidanka amaanka.
Wasiirka Wasaaradda amniga Xukuumadda Federaalka Xasan Xundubey Jimcaale oo maanta ka hadlayay Shirki Banbaxa Golaha wasiiradda ayaa shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay la shaqeeyaan laamaiga amniga dowladda ee u taagan sugida amniga Caasimadda.
Wasiir Xundubey oo soo hadal qaaday howlaha shaqo ee Ciidanka amniga ayaa Ciidanka amniga ku tilmaamay inay yihiin kuwa Mujaahidiin ah oo Jihaad ku Jira, isla markaana u taagan difaaca shacabka iyo qaranimadda Soomaaliyeed.
Sidoo kale Wasiir Xasan Xundubey faray Ciidanka amniga inay sii laba jibaaran shaqada sugida amniga Magaalada Muqdisho oo mararka qaarkood ay ka dhacaan falal amni darro, ayna geystaan Al-shabaab.
Mudooyinkii ugu dambeyey ayaa ciidaamada amaanka waxaa ay wadeen howlo lagu sugayo amaanka Magalada
Maqaal horeFaahfaahin laga Helayo Askar lagu toogtay degmada Beydhabo ee gobolka Baay.
Maqaal XigaSAWIRRO:-Gorgorkii 20-ka sano Basaaska ahaa oo Geeriyooday.